Codsiyada Loogu talagalay Qabanqaabiyaasha Hoolka | Ururka Horumarinta Dhaqanka ee Ota Ward
Si looga hortago faafida cudurka cusub ee coronavirus, waxaan ka codsaneynaa qabanqaabiyaha inuu fahmo lana shaqeeyo waxyaabaha soo socda markii la isticmaalayo xarunta.
Intaas waxaa sii dheer, markaad isticmaaleyso xarunta, fadlan tixraac tilmaamaha ay abuureen koox kasta oo warshadeed ah kana codso fahankaaga iyo iskaashigaaga kahortaga faafitaanka cudurka cusub ee coronavirus.
Liiska tilmaamaha kahortaga faafitaanka cudurka ee warshadaha (Websaytka Xoghaynta Golaha)
Sii hagaajin / kulan
Qabanqaabiyaha wuxuu kulan la yeelan doonaa xarunta oo ku saabsan dadaalada looga hortagayo faafitaanka cudurka waqtiga la codsanayo in lagu isticmaalo xarunta ama waqtiga kulamada hore.
Markaan qabanayno dhacdada, waxaan qaadi doonaa talaabooyin looga hortagayo faafitaanka infekshinka iyadoo la raacayo tilmaamaha warshad kasta, iyo iskuxidhka qeybsiga doorarka u dhexeeya qabanqaabiyaha iyo xarunta.
Fadlan dejiso jadwal deeqsi ah oo loogu talagalay diyaarinta, ku celcelinta, iyo ka saarista.
Fadlan deji waqtiga nasashada iyo waqtiga gelitaanka / bixitaanka oo waqti badan la helo.
Dhacdooyinka ku lug leh dhaqdhaqaaqa dadka ee waddanka oo dhan (heshiisyada qaran, iwm.) Ama dhacdooyinka leh in ka badan ka qaybgalayaasha 1,000, Qaybta Isuduwidda Maareynta Dhibaatooyinka, Qeybta Maareynta Kahortagga Musiibooyinka, Waaxda Kahortagga Musiibooyinka, Tokyo, waa in laga hadlo laba toddobaad ka hor taariikhda dhacdada Fadlan samee la-talin hore (soo gudbi xaashida la-tashiga ka-hor dhacdada).
Haddii aad rabto inaad ku isticmaasho hoolka adoo adeegsanaya shuruudaha yareynta, fadlan soo gudbi lifaaqa "Foomka Xaqiijinta ee Dhaqangelinta Tallaabooyinka looga Hortagayo Faafitaanka Cudurada Faafa ee Coronavirus" ugu yaraan 10 maalmood ka hor dhacdada.Fadlan la soco haddii aadan gudbin, xaq uma yeelan doontid nasashada.
Xaqiijinta ku saabsan hirgelinta tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurrada cusub ee coronavirus (Aprico)
Xaqiijinta ku saabsan hirgelinta tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurrada cusub ee coronavirus (Plaza)
Xaqiijinta ku saabsan hirgelinta tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka cudurrada cusub ee coronavirus (Cultural Forest)
Ku saabsan qoondaynta kuraasta (awoodda xarunta)
Sida caadiga ah, kuraasta waa in loo qoondeeyaa kaqeybgalayaasha si qabanqaabiyaha uu u maareeyo una habeeyo xaalada fadhiga.
Kadib marka si buuxda loo qaato talaabooyinka xakamaynta cudurka lagama maarmaanka ah sida xirashada maaskaro iyo cabudhinta dhawaaqa iyo dareenka shaqsi ahaaneed ee qabanqaabiyaha, heerka hoygu wuxuu noqon doonaa 50% ka mid ah awooda.
Bandhigyada la filayo in ay ka soo qayb galaan dad aad u tiro badan oo waayeel ah iyo dad qaba cudurro daba dheeraada, waxaa jirta khatar sare oo ah in ay ka sii darto haddii ay dhacdo infekshinka, markaa fadlan ka fiirso inaad qaaddo tallaabooyin taxaddar badan leh
* Qabashada kuraasta safka hore: Mabda 'ahaan, kuraasta safka hore looma adeegsan karo si loo hubiyo masaafad ku filan xagga hore ee masraxa (fogaanta jiifka ah ee XNUMX m ama ka badan).Haddii ay taasi adag tahay, qaado tallaabooyin la mid ah sida masaafada loo fogeeyo, sida xirashada wejiga gaashaanka.Fadlan la xiriir xarunta wixii faahfaahin ah.
Tallaabooyinka ka hortagga infekshinka ee dhinacyada la xiriira sida kuwa wax qabanaya
Abaabulaha iyo dhinacyada la xiriira waxaa laga codsanayaa inay sameeyaan dadaal si looga hortago infekshinka sida ugu macquulsan, sida iyadoo la qaadanayo kala-qaad ku filan oo u dhexeeya kuwa wax qabanaya iyadoo la raacayo tilmaam ugu yaraan XNUMX m, iyadoo ku xiran qaabka muujinta.Ka eeg tilmaamaha warshadaha wixii macluumaad dheeraad ah.
Kuwa sameeya mooyee, fadlan xiro maaskaro iskana nadiifi gacmahaaga xarunta.
Meelaha dad aan tiradooda la cayimin ay si fudud u taaban karaan, sida qolalka labiska iyo qolalka sugitaanka, ku rakibo dawo jeermiska lagu nadiifiyo gacmaha iyo jeermiska si joogto ah.
Qolka labiska waa inuu u dhexeeyaa 50% tirada ugu badan ee dadka si looga fogaado inay dadku ku badan yihiin.
Cunista iyo cabitaanka xarunta waa mabnuuc mabda 'ahaan.Si kastaba ha noqotee, fuuq-celinta ayaa loo oggol yahay inay ilaaliso caafimaadka wanaagsan. (Kama cuni kartid ama wax kuma cabi kartid kuraasta hoolka).
Xulo qof gacanta ku haya qalab, qalab, qalab, iwm, oo xaddid wadaagga dadka aan la cayimin.
Intaas waxaa sii dheer, fadlan qaado tallaabooyin ka hortag ah oo ku filan oo ku saabsan ficil ahaan, tababar ahaan, diyaarin / ka saarid, iwm.
Haddii aad ka shakisan tahay infekshin, isla markiiba u sheeg xarunta oo ka karantiilo rugta gargaarka degdegga ah ee loogu talagalay.
Tallaabooyinka ka-hortagga infekshinka ee ka-qaybgalayaasha
Kaqeybgalayaashu waa inay codsadaan cabirka heerkulka kahor imaatinka goobta, oo si buuxda loogu wargaliyaa kiisaska halka laga weydiin doono inay ka waantoobaan booqashada.Xaaladdaas, fadlan qaado tallaabooyin ay ka mid yihiin wareejinta tigidhada iyo soo celinta iyadoo ku xiran hadba xaaladda si ka-qaybgalayaashu aysan u dhicin sida ugu macquulsan uguna macquulsan isla markaana looga hortegi karo gelitaanka dadka astaamaha leh.
Kaliya maahan is-cabbirka kaqeybgalayaasha, laakiin sidoo kale qabanqaabiyaha waa inuu qaadaa tallaabooyin sida cabbirka heerkulka markuu galayo goobta.Qabanqaabiyaha waxaa laga codsanayaa inuu diyaariyo qalabka cabbirka heerkulka (heerkulbeeg aan la xiriirin, heerkulbeeg, iwm).Haddii ay adag tahay in la diyaariyo, fadlan la xiriir xarunta.
Marka ay jirto qandho sare marka loo eego kuleylka caadiga ahHaddii (*) ama astaamaha soo socda midkood la adeegsado, waxaan qaadi doonaa tallaabooyin sida sugitaanka guriga.
Calaamadaha lagu garto sida qufac, dyspnea, guud ahaan xanuun, cune xanuun, sanka oo dareera / ciriiriga sanka, dhadhanka / urta, xanuunka jirka / murqaha, shuban, matag, iwm.
* Tusaale ka mid ah heerka "marka uu jiro kuleyl ka sarreeya kuleylka caadiga ah" ... Marka uu jiro kuleyl ah 37.5 ° C ama ka sareeya ama XNUMX ° C ama ka sarreeya kuleylka caadiga ah
Si looga fogaado ciriiriga markii la galayo iyo marka laga baxayo, fadlan ilaali masaafad kugu filan (ugu yaraan XNUMXm) adoo galaya kana baxaya waqti dib u dhac leh, hubinta hogaaminta, iyo qoondaynta shaqaalaha.
Buugga waa la xireynaa waqtigaas.
Fadlan horay u sii waqti ka bixidda oo ku dar dar bixidda iyadoo dib u dhac ku leh aag kasta oo ka mid ah goobta.
Fadlan iska ilaali inaad sugto ama booqato waxqabadka kadib.
Fadlan iskuday inaad fahanto magacyada iyo macluumaadka xiriirka degdega ah ee kaqeybgalayaasha adoo adeegsanaya nidaamka tigidhada.Intaas waxaa sii dheer, fadlan horey ugu sii wargeli ka qaybgalayaasha in macluumaadka noocaas ah la siin karo hay'adaha dawladda sida xarumaha caafimaadka dadweynaha markii loo baahdo, sida marka qof qaba cudurka uu ka yimaado ka qaybgalayaasha.
Fadlan si firfircoon uga faa'iideyso codsiga xaqiijinta xiriirka (COCOA) ee Wasaaradda Caafimaadka, Shaqada iyo Daryeelka.
Ka-qaybgalayaasha u baahan tixgelinta, dadka naafada ah, dadka waayeelka ah, iwm, fadlan ka fiirso tallaabooyinka ka hor-tagga ah.
Fadlan sidoo kale wac feejignaanta kahortaga infekshinka kahor iyo kadib waxqabadka, sida isticmaalka baahsan ee gaadiidka iyo makhaayadaha.
Ka hortaga faafitaanka cudurka
Qabanqaabiyaha waa inuu si dhakhso leh ula xiriiraa xarunta haddii qof looga shakiyo inuu cudurka qabo oo uu kala hadlo jawaabta.
Sida caadiga ah, qabanqaabiyaha waa inuu la socdaa magacyada iyo macluumaadka xiriirka degdegga ah ee dadka ku lugta leh dhacdada iyo kaqeybgalayaasha, waana inuu hayaa liiska la abuuray muddo cayiman (ugu yaraan hal bil).Intaas waxaa sii dheer, fadlan ogeysii dadka kaqeybgalaya munaasabada iyo kaqeybgalayaasha horeyba in macluumaadka noocaas ah loo siin karo xarumaha bulshada sida xarumaha caafimaadka bulshada hadba sida loogu baahdo.
Aragtida ilaalinta macluumaadka shakhsiga ah, fadlan qaado tallaabooyin kugu filan oo aad ku kaydin karto liiska, iwm, oo si habboon u tuur ka dib marka muddadu dhammaato.
Fadlan ka taxaddar marka aad la tacaaleyso macluumaadka dadka cudurka qaba (oo ay ku jiraan kuwa wada nool, iwm.) Ee dhacay, maxaa yeelay waxay noqon doonaan macluumaad shakhsiyeed oo xasaasi ah.
Fadlan deji shuruudaha ogeysiiska dadweynaha iyo waxqabadka marka qof cudurka qaba uu dhaco.
Qolka looga hortago infekshinka
La xiriir tallaabooyinka ka hortagga cudurka
Qabanqaabiyuhu waa inuu ku rakibo nadiifiye gacmeed meelaha lagama maarmaanka ah sida irridda iyo ka bixida goobta oo si joogto ah u hubiyo si aan wax u yarayn.
Qabanqaabiyaha waa inuu si joogto ah jeermiska ugu diraa goobta oo ah meel ay si fudud u heli karaan dadweynaha guud.Fadlan diyaarso xalka jeermiska diraha ee qabanqaabiyaha.
Si looga hortago infekshinka xiriirka, fadlan tixgeli fududaynta tigidhada waqtiga gelitaanka.
Fadlan iska ilaali inaad siisid waraaqo, waraaqo, su'aalo, iwm intii suurogal ah.Sidoo kale, haddii laga fursan waayo, hubi inaad gashato galoofyo.
Fadlan ka fogow xiriirka u dhexeeya dadka ku lug leh waxqabadka iyo ka qaybgalayaasha, sida booqashooyinka waxqabadka ka dib.
Fadlan ka fogow soo bandhigida ama wax gelinta.
Fadlan xaddid aagagga ay kaqeybgalayaasha iyo dhinacyada la xiriira soo geli karaan (xaddid ka-qaybgalayaashu inay geli karaan aagga qolka labiska, iwm).
Tallaabooyinka looga hortagayo infekshinka dheecaanka
Sida caadiga ah, kaqeybgalayaashu waa inay xirtaan waji dabool inta ay munaasabaddu socoto.
Fadlan qaado tallaabooyin si looga hortago ciriiriga inta lagu jiro biririfyada iyo ka bixitaanka.
Haddii ay jiraan kaqeybgalayaal sameeya cod dheer, qabanqaabiyaha waa inuu si gaar ah ugu fiirsadaa.
Tallaabooyinka ka hortagga infekshinka ee u dhexeeya dhinacyada la xiriira (gaar ahaan kuwa wax qabanaya) ⇔ ka-qaybgalayaasha
Fadlan ka joogso jihaynta taas oo kordhinaysa halista infekshinka (codsi farxad leh, ka qaybgalayaasha kor u qaad masraxa, bixinta shan sare, iwm).
Fadlan u oggolow meel ku filan (ugu yaraan XNUMXm) markaad hagayo iyo hagayso ka qaybgalayaasha, oo xiro maaskaro iyo wejiga gaashaanka haddii loo baahdo.
Xisaabiyaha la soo xiriiraya kaqeybgalayaasha (soo dhaweynta martiqaadka, miisaska tikidhada isla maalinta ah), iwm, ku dheji qeeybaha sida looxyada acrylic iyo daahyada vinyl-ka oo daahfuran si looga gaashaanto ka qeybgalayaasha
Tallaabooyinka ka hortagga infekshinka ee u dhexeeya kaqeybgalayaasha ⇔ kaqeybgalayaasha
Waa qasab in la xidho maaskarada kuraasta dhagaystayaasha, fadlan hubi inaad si fiican u xirato adigoo u qaybinaya una iibinaya kaqeybgalayaasha aan xirneyn isla markaana fiiro gaar ah u yeelanaya shaqsiyaadka.
Fadlan u oggolow waqti ku filan nasashada iyo waqtiyada gelitaanka / bixidda, iyadoo la tixgelinayo awoodda iyo awoodda goobta, marinnada laga baxo / laga baxo, iwm.
Fadlan u sheeg inay ka gaabsadaan inay hadlaan xilliyada biririfyada iyo marka ay soo galayaan iyo marka ay baxayaanba, kuna dhiirrigeli inay ka waantoobaan wadahadallada fool-ka-foolka ah ayna ku negaan doonaan masaafo gaaban hoolka.
Haddii tiro badan oo kaqeybgalayaal ah la filayo, fadlan u isticmaal dib u dhac waqtiga tikidhada nooc kasta iyo aaggooda markay ka guurayaan kuraasta dhagaystayaasha xilliyada nasashada ama marka ay baxayaan si looga hortago fadhiidnimo.
Qolalka musqulaha inta lagu jiro biririfyada, fadlan ku dhiirrigelinta isku xirnaanta meel ku filan (ugu yaraan XNUMXm) iyada oo la tixgelinayo cabbirka dhismaha.
Cunista iyo cabidda
Cunista iyo cabitaanka xarunta waa mabnuuc mabda 'ahaan.Si kastaba ha noqotee, fuuq-celinta ayaa loo oggol yahay inay ilaaliso caafimaadka (kuma cuni kartid ama kama cabbi kartid kuraasta hoolka).
Fadlan dhammee cuntadaada kahor iyo kadib gelitaanka sida ugu macquulsan.
Sababtoo ah isticmaalka muddada dheer ee xarunta, lagama fursan karo in wax lagu cuno qolka, laakiin fadlan la soco qodobbada soo socda.
U fariiso qaab aan waji ka waji lahayn.
Masaafada udhaxeysa dadka isticmaala waa inay ahaataa ugu yaraan XNUMX m.
Ka fogow wadaagista bistooladaha iyo taarikada u dhexeeya isticmaaleyaasha.
Ka jooji hadalka inta lagu jiro cuntada.
Xidho maaskaro mar kasta oo ay suuragal tahay.
Iibinta alaabada, iwm.
Markay ciriiri tahay, fadlan xaddid gelitaanka iyo habaynta sida loogu baahdo.
Fadlan rakibi jeermi-dile markaad wax iibineyso.
Shaqaalaha ku howlan iibinta badeecadaha waa inay xirtaan galoofyada iyo gaashaanka wajiga hadba sida loogu baahdo marka lagu daro xirashada waji xidhka.
Markaad iibinaysid alaabada, fadlan ha qabsan bandhigga alaabada muunada ama alaabada muunada ah ee dad badani taaban doonaan.
Tixgeli inaad wax ku iibiso khadka tooska ah ama aad bixiso lacag la'aan si aad u yareyso la macaamilka lacagta sida ugu macquulsan.
Nadiifinta / daadinta qashinka
Hubso inaad u xirato waji-gashiga iyo gacmo gashi shaqaalaha u nadiifiya qashinka.
Markaad dhamayso shaqada, dhaq oo jeermiska ku nadiifi gacmahaaga.
Fadlan si fiican u maamul qashinka la soo ururiyey si ka qaybgalayaashu aysan ula soo xiriirin toos.
Fadlan horey u sii qaado qashinka guriga laga soo saaray. (Ka shaqeynta lacag bixinta ayaa suurtagal ku ah xarunta).